कसरी एक आईफोन बाट अर्कोमा डाटा ट्रान्सफर गर्ने आईफोन समाचार
वर्षको समय आउँछ जब धेरै प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो आईफोन नवीकरण गर्दछन्, र यसको मतलब यो फेरि सेटअप गर्नुपर्दछ। सबै अनुप्रयोगहरू पुन: स्थापना गर्नुहोस्, फोल्डरहरूमा राख्नुहोस्, तपाईंको आईक्लाउड खाता कन्फिगर गर्नुहोस्, ईमेल अनुप्रयोग, टर्मिनल कन्फिगरेसन विकल्पहरू ... एक प्रक्रिया जुन प्राय जसो थोरै तपाईको नयाँ आईफोन प्रयोग गर्न सुरू गर्न चाहानुहुन्छ। ठिक छ, तपाईं यी सबै बचत गर्न सक्नुहुन्छ, र यो धेरै सजिलो छ।
आईओएस १२..12.4 को विमोचन पछि, एक आईफोनबाट अर्कोमा सबै डाटा ट्रान्सफर गर्न पहिले भन्दा सजिलो छ, यसलाई आईट्यून्समा जडान नगरीकन, आईक्लाउडबाट सबै डाटा डाउनलोड गर्न प्रतीक्षा नगरीकन। तपाईं नयाँमा तपाईंको पुरानो आईफोन क्लोन गर्न सक्नुहुनेछ, र यो एक अर्ध स्वचालित प्रक्रिया हो जुन हामीले तल वर्णन गर्दछौं।
यो प्रक्रिया गर्नको लागि हामीलाई तपाईको पुरानो आईफोन चाहिन्छ, जसलाई तपाई क्लोन गर्न चाहानुहुन्छ, र नयाँ आईफोन तपाई लाई सबै डाटा ट्रान्सफर गर्न चाहानुहुन्छ। पछिल्लो क्लासिक खाली खाली प्रारम्भिक कन्फिगरेसन बिना नै हुनुपर्दछ जुन "नमस्कार" धेरै भाषाहरूमा पढ्न सकिन्छ।
दुई आईफोन एक अर्को सँगै राख्नुहोस्। यदि तिनीहरूसँग कम ब्याट्री छ भने, तिनीहरूलाई हालको लागि राम्रोसँग जडान गर्नुहोस्, यद्यपि यो आवश्यक छैन, सिफारिस गरिन्छ।
नयाँ आईफोनको कन्फिगरेसन प्रक्रिया सुरू गर्नुहोस्, तपाईले प्रयोग गर्न चाहानुभएको भाषा चयन गर्नुहोस्।
तपाईंको पुरानो आईफोनमा विन्डो देखा पर्नेछ र नयाँ आईफोन कन्फिगर गर्न यसको प्रयोगको सम्भावना दर्साउँदै «जारी राख्नुहोस् on मा क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईंले पुरानो आईफोन लिनुपर्नेछ र क्यामेराको साथ नयाँ आईफोनको स्क्रिनमा देखा पर्ने पोइन्टको क्लाउड स्क्यान गर्नुपर्नेछ, एप्पल वाचको साथ प्रयोग गरिएको जस्तै तरीकाले।
स्वचालित सेटअप प्रक्रिया सुरू हुनेछ।
अब तपाईंले नयाँ आईफोन हेर्नुपर्नेछ, किनकि बिभिन्न बिन्दुहरूमा तपाईंले केही डाटा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ, जस्तै पुरानो आईफोनको अनलक पासवर्ड, वा तपाईंको खाताको आईक्लाउड पासवर्ड। तिनीहरू सुरक्षा उपायहरू हुन् तपाईको आईफोनलाई सजिलै क्लोनिंग गर्न कसैलाई रोक्न। एकपटक यो गरेपछि, एक आईफोनबाट अर्कोमा डाटा हस्तान्तरण सुरू हुनेछ, प्रक्रिया जसको अवधिको डाटा हस्तान्तरण गर्न को मात्रा मा निर्भर गर्दछ।। मेरो मामलामा यो २०-२20 मिनेट जति भयो, त्यसपछि मसँग समान सामग्रीका साथ दुईवटा आईफोनहरू थिए। यसले तपाईंको एप्पल वाचलाई तपाईंको नयाँ आईफोनमा पनि स्थानान्तरण गर्दछ।
यो प्रक्रिया केबलद्वारा पनि गर्न सकिन्छजुन तपाईसँग कम स्पीड इन्टर्नेट जडान छ भने यो आदर्श हो, तर हाल कुनै बिजुली देखि बिजुलीको केबल छैन, त्यसैले तपाईलाई एक USB- लाइटनिंग एडेप्टर र USB लाई लाइटनिंग केबल तपाईको आईफोन चाहिन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS 13 » कसरी एक आईफोन बाट अर्कोमा डाटा ट्रान्सफर गर्ने
यी जानकारीहरूका बारे पुरानो आईफोनदेखि नयाँमा, के मसँग २ समान सिमहरू छन् (प्रत्येक मोबाइलमा एक)?
फर्नांडो पी। भन्यो
कुन बिंदुमा म नयाँ फोनमा सिम कार्ड परिवर्तन गर्छु?
फर्नान्डो पी लाई जवाफ दिनुहोस्।
कुन बिन्दुमा सिम कार्ड नयाँ फोनमा परिवर्तन गर्नुपर्दछ?
यस ट्रान्सफर विकल्पमा, पुरानो मोबाइलको सबै व्हाट्सएपलाई के हुन्छ? के तिनीहरू पूर्ण रूपमा उल्टो छ वा तपाईंले WA को आफ्नै ब्याकअप पनि गर्नुपर्दछ?
Iago लाई जवाफ दिनुहोस्
एक सटीक प्रतिलिपि बनाइएको छ
सबै प्रकारका ईमेलहरू, व्यवसायिक पनि पास गर्ने हो?
आईफोन ११ प्रो अधिकतम समीक्षा: एप्पलले हामीलाई सोधेको कुरा दिन्छ